Ra’iisul wasaaraha oo ka hadlay abaaraha dalka ka jira. - Wargeyska Faafiye
Ra’iisul wasaaraha oo ka hadlay abaaraha dalka ka jira.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa sheegay in lix qof ay u dhinteen haraadka iyo gaajada ay sababeen abaaraha ka jira meella badan oo kamid ah dalka.
Waxaa uu sheegay in xukuumaddiisa ay qaadeyso tallaabooyin dheeraad ah oo wax looga qabanayo abaarta, iyadoo la ballaarinayo howlaha gargaarka ee ay wadaan guddiga dowladdu u xilsaartay gurmadka abaaraha.
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay gacan ka geysato sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaannada Somaliland, Puntland iyo gobollada koonfureed, isagoo intaas ku daray in codsi ku aaddan kaalmo dadkaas ay helaan ay gaarsiiyeen Mareykanka, Turkiga iyo Qaramada Midoobey.
Abaaraha Soomaaliya ka jira xilligan ayaa saameyn ku yeeshay kumannaan Soomaali u badan xoolo dhaqato.
Gobollada qaar ayaa ayaa webiyada ay biyo yaraayeen, waxaana jira digniino ay hay’adaha samafalka bixinayaan oo la xiriirto in dad badan ay u dhiman garaan haraad iyo gaajo, haddii aysan helin gargaar deg-deg ah.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsFarah Macallim oo sheegay in Ciidamada AMISOM ay Hubka iyo agabka Ciidamada ka iibiyaan Xoogaga Alshabaab (Warbixin xasaasi ah)Somali refugee student’ mowed down classmates with his car and slashed them with a butcher’s knife at Ohio State University.Guriga ugu qaalisan aduunkaDOWLADA MAREEYKANKA OO WEERARTAY AL-SHABAAB11 killed in car bomb blast in Mogadishu . © 2017 Wargeyska Faafiye. All rights reserved.FAAFIYE.COM